यस्ता छन् घरेलु उपचार:पैतलामा जलन हुँदा सिरे नुन फाइदाजनक छ। एउटा भाँडोमा मनतातो पानी हालेर त्यसमा आधा कप सिरे नुन मिसाउने। १० देखि १५ मिनेटसम्म खुट्टा त्यसमा डुबाउने।केही समयसम्म नियमित यस्तो गरिरहँदा समस्या हट्छ।मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत समस्या भएकाहरूले यो उपाय अपनाउनुअघि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ।
शाकाहारी खानेकुरा खानेले दूध, दही, पनिरलगायत दुग्ध पदार्थ नियमित खानुपर्छ। प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। मांसाहारीहरूले अण्डा, माछा, चिकन, सी फुडबाट भिटामिन बी प्राप्त गर्न सक्छन् ।लौका काटेर त्यसको गुदी पैतलामा दल्नाले पनि राहत मिल्छ ।बेसारमा पाइने एन्टी ब्याक्टेरियल तत्वले पनि यस समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ
Previous सांसद वलीले वाईसीएल कार्यकर्ता बस्नेतको गालामा किस गरेको तस्विर भाइरल ! कसरी भयो गोप्य फोटो लिक ?
Next माधव नेपाल पक्षद्वारा नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा, पार्टीको नाम अझै जुरेन के राख्दा राम्रो होला?